Ullenhag: kontoroolka aqoonsiga lama aqbali karo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ullenhag: kontoroolka aqoonsiga lama aqbali karo
La daabacay fredag 22 februari 2013 kl 16.19
Sidaan horey ugu warbaxiney booliska ayaa magaalooyinka dalka ka wada kontoroolka aqoonsiga dadyowga sharci la'aanta ku jooga dalkaan Iswedhen.
Wasiirka is-dhex-galka Erik Ullenhag ayaa ugu baaqay booliska in wax ka qabtaan eedeymaha loo jeedinayo ee oranya in booliska ay ku joojiyaan dadka muuqaalkooda si ay u hubiyaan in ay sharci la'aan dalka jogaan iyo in kale.
Booliska ayaa mar UU horey kontorool uga wadey T-centralka Stockholm warbahinta u sheegey in ay joojiyaan dadka isku daye in ay kaar la'aan ku raacaan tareenada kuwaas oo ay ka baarayaan dadyowga sharci la'aanta dalka ugu sugan si wadanka looga saaro.
- Waxay u muuqan kartaa in dadka aan kontorooleyno aan ku dooraneyno muuqaalkooda. Laakiin waxaan sidaas u sameyneynaa in aan meel marino hadafka hay'ada booliska ee ah in dalka laga saaro dadyowga sharci la'aanta ah, saas darted waa in aan kontoroolnaa dadyowga muuqaalka dibada ka soo jeeda yeelan kara, sidaas waxa SVT u sheegey Patric Josefsson oo ah boolis.
Arintaan ayuu hada ku tilmaamey wasiirka is-dhex-galka mid aan la qaadan karin.
- Hadii ay run tahay in dadka jinsigooda modowo darteed loo joojiyo si aqoonsigooda loo kontoroolo, taas ma ahan wax la qaadan karo. Kontoroolka aqoonsiga in lagu saleeyo jinsiga iyo muuqaalka qofka waa mid sharciga ka soo horjeeda, ayuu yeri Erik Ullenhag.